युरोपमा १० करोड मानिस ‘लकडाउन’ ! हेर्नुहोस् फोटोहरु « Online Tv Nepal
युरोपमा १० करोड मानिस ‘लकडाउन’ ! हेर्नुहोस् फोटोहरु
Published : 20 March, 2020 9:03 pm
युरोपमा कोरोनाभाइरसको प्रकोप बढ्दै जाँदा १० करोड मानिसहरु आफ्नो घरभित्रै ‘लकडाउन’ भएका छन् । यहाँका देशको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा बन्द गरेका छन् । बार र रेष्टुरेण्टहरु पूरै बन्द भएका छन् । शहरका बासिन्दाहरु सबै घरभित्रै बसेपछि स्पेन, जर्मनी, युक्रेन र सर्बियाका शहरहरु भूताहा शहरजस्ता भएका छन् । युरोपमा मात्र कोरोनाभाइरसले २ हजारभन्दा धेरैको ज्यान लिइसकेको डेलिमेलले लेखेको छ ।
काठमाडौं : दैलेखमा रहेको पेट्रोलियम खानी उत्खननका लागि चिनीयाँ प्राविधिक टोली नेपाल आइपुगेको छ ।
काठमाडौं : अमेरिका भ्रमणमा रहेका प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले भर्जिनियास्थित ‘नेसनल म्युजियम अफ द मरिन क्रप्स’को